Baarlamanka Galmudug oo u codeeyey laba senator - Bulsho News
Barn. Martida Makrafoonka: Wasiir Cabdiraxmaan Cabdi Axmed
Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta qabtay doorashada laba xubnood oo ka harsan xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa dib loogu doortay kursigii uu ku fadhiyay Senator Cabdi Xassan Cawaale Qeybdiid. Waxaa isna doorashada maanta ku soo baxay Cabdi Cismaan Xareed oo noqonaya senator cusub oo Galmudug ku matali doona Aqalka Sare.
Doorashada ayaa u dhacday qaab gacan taag ah ka dib markii ay tanaasuleen musharraxiintii kale ee kuraastan kula tartami lahaa ragga la doortay.
Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macallin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Labadan senator ee maanta la doortay ayaa dhameystiraya tirada sideedda xubnood ah ee Galmudug ay ku leedahay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxa ay sidoo kale tani ka dhigan tahay in dhammaan xubnaha Aqalka Sare ay haatan dhamesytiran yihiin, lana filayo in maalmaha soo socda ay bilaabaan in ay isku yimaadaan si ay guddoon dhexdooda isaga doortaan.
Doorashada xubnaha Aqalka Sare oo ka kooban 54 xubnood ayaa bilaabatay 29-kii July ee sanadkan, iyadoo qaadatay ku dhowaad afar bilood.
Doorashada Soomaaliya: Guddiga doorashadu muxuu ka yiri cabashooyinka...
Beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashada...
Yaasiin Farey: Weli qoriga waan wataa oo ma...
Wareysi: Sheekh Mukhtaar Roobow oo arrimo xasaasi ah...
Maxkamada Sare Ee Oo Laashay Dacwad ay U...
Frank Lampard Oo Man United Ka Caawin Kara...
Kooxda Daacish oo sheegatay qaraxii ka dhacay Kampala
Dan Cooper: Ninka inta uu diyaaradda afduubtay, madaxfurashana...